महिलाहरु कुन समय बढी उ,त्ते,जित हुन्छन् ? |
Home अन्य महिलाहरु कुन समय बढी उ,त्ते,जित हुन्छन् ?
धनकुटाकी आइतमायाँ राई नाम परिवर्तन १८ वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पुगेकी थिइन् । राईले १८ वर्षसम्म कतारीको घरमा कैदी सरह काम गरेर जीवन बिताइन् ।
२९ वर्षको उमेरमा रोजगारीका लागि कतार पुगेकी राई ४७ वर्ष पुगेपछि स्वदेश फर्किइन् । १८ वर्षअगाडि धरानका रोहित लिम्बूले इजरायल भनेर रोजगारीका लागि कतार पुर्‍याएको आइतमायाँ बताउँछिन् ।कतारीले ८ वर्ष त घर बाहिर निस्कनसम्म दिएन । सुरु सुरुमा घरमा काम गरे ।
पछि साहुले मरुभूमिमा रहेको बाख्राभेडा फार्ममा काम गर्न लग्यो । जीवन त कतारको मरूभूमिमा बिताएर स्वदेश फर्किए । १८ वर्ष धेरै दुःख पीडा भोगेर नेपाल आएँ राईले भनिन् । कतार रोजगारीमा जानुअघि माओवादी यु(द्धमा होमिएकी थिएँ ।
यु(द्धका क्रममा खोटाङमा एक जना मान्छे मा(र्नु पर्‍यो । त्यो मान्छे मा(रेपछि आर्मी र प्रहरीको खोजी सूचीमा परे । त्यसपछि भागेर रोजगारी का लागि भारत हुँदै इजरायल हिँडेको कतार पुगेँ’,उनले भनिन कतारीले ८ वर्ष त घर बाहिर निस्कनसम्म दिएन । सुरु सुरुमा घरमा काम गरे । पछि साहुले मरुभूमिमा रहेको बाख्राभेडा फार्ममा काम गर्न लग्यो ।
१० वर्ष मरुभूमिमा बालुवाभित्र बाख्राभेडा गोठमा काम गरेर बिताए । भिनाजु पर्ने एजेन्टलाई तिरेको राईलाई याद छ । कतारमा घरेलु रोजगारीमा गएका विदेशी महिला कामदारको जीवन क(ष्टकार र शा(रीरिक शो(षणमास् १० वर्ष भारतीय मुलका मान्छे मात्र कहिलेकाँही भेडाबाख्राको मासु किन्न आएको देख्न गरेको उनको भनाइ छ ।
यो समय परिवारसँग ६ महिनामा एक पटक फोनमा सम्पर्क हुने गरेको राईले सुनाइन् । १८ वर्षअघि कतार जाँदा ७० हजार रुपैयाँ म्यानपावरमा काम गर्दै आएका भिनाजु पर्ने एजेन्टलाई तिरेको राईलाई याद छ । कतारमा घरेलु रोजगारीमा गएका विदेशी महिला कामदारको जीवन क(ष्टकार र शा(रीरिक शो(षणमा परे पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
घरेलु रोजगारीका लागि कतारी नागरिकले भारतीय र नेपाली महिलालाई खरिद गरेर मनलाग्दी गर्दै राख्ने गरेको राईले अनुभव सुनाउछिन् । कतार पुगेपछि साथमा राहदानी नभएका कारण घर फर्कन पाएको छैन भनेर सुनाँउदा तपाई जस्ता धेरै नेपाली महिलाहरु कतारमा अलपत्र छन् भन्दै उनी तर्किएको राईले सुनाइन् ।
मैले गुहार मागेको पत्रकार समेत घरेलु महिला कामदार रोजगारीमा लैजाने म्यानपावर र एजेन्टका सहयोगी भएर काम गर्ने गरेको थाहा पाएको राईले बताइन् । ती पत्रकार त कतारमा घरेलु महिला कामदार ओसार्न म्यानपावर र एजेन्टका सहयोगी रहेछन् । कहाँबाट आफ्ना देशका चेलीबेटी उद्धार गर्न सहयोग गर्छन्’,
उनले भनिन् ‘मैले सहयोग मागेका पत्रकारले घरेलु महिला कामदारले समस्यामा परेपछि दूतावासमा गरेको उजुरी दिने व्यक्तिका बारेमा एजेन्ट र म्यानपावरसम्म पुर्‍याउने काम गर्दा रहेछन् । विदेशले धेरै घरपरिवारमा खुसी ल्याएको छ । तर, मेरो जीवनमा पीडा दियो र उमेर सकियो ।
समाजले मात्र होइन सरकारले समेत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला कामदारलाई तिस्कार गर्ने गरेको उनको आरोप छ । म कतारमा १८ वर्ष लुटिए यो मेरो रहर होइन बा(ध्यता थियो उनले भनिन् । श्रम मात्र होइन शा(रीरिक शो(षणमा परेर फर्किएका महिला कामदारलाई सरकारले समाजमा पुनःस्थापन गर्ने सहयोग नगर्ने गरेको राई गुनासो गर्छिन् ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला कामदारलाई समाजले असमान व्यवहार र विदेशमा इज्जत सकेर आएका भनेर घृणाको भावमा हेर्ने गरेको राईको भनाइ छ । युइस अनलाइनखबरले समाचार छापेको छ। एजेन्सीको सहयोगमा